Sebenzisa amandla e-Instagram kunye nemifanekiso ukwakha uLuhlu lwaBalandeli abaQinisekayo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 28, 2018 0 IiCententarios 932
Iindlela zokufumana uluhlu lwabalandeli abaqinileyo
Un Iprofayile ye-Instagram ayisiyonto ngaphandle kwesiseko se fan esiqinileyo. Akunakuba njalo urhwebo ngaphandle kwabaphulaphuli ukufikelela koko kuya kufuneka ufumane uluhlu Abalandeli. Kuya kufuneka usebenzise iindlela ezintsha zokufikelela kubasebenzisi abatsha. Kuya kufuneka Veza izithuthi kumsebenzisi wakho Kuya kufuneka ugcine incoko iphila ngokujikeleze umxholo wayo.
Kwesi sahluko, siza kuthetha ngendlela yokusebenzisa ezinye iiwebhusayithi ukusasaza igama lakho. Siza kuthetha ngendlela yokusebenzisa ii-hashtag ezidumileyo ezivumela umxholo wakho ukuba uqhubeke ngaphandle kokuchaphazeleka kwemihla ngemihla komxholo omtsha wegraphic osele udlulile kubalandeli bakho.
Sebenzisa amanye amajelo ukusasaza igama
Kwinkqubo yeendaba zokunxibelelana zale mihla, akukho iqonga leendaba ezentlalo yodwa, kwaye akukho mxholo ngu (kwaye ayifanele ukuba ibe) kwiqonga layo lendalo. Ukwabelana ngeqonga-yeqonga yenye yezinto ezinomdla malunga nesicelo esisebenzayo njenge-Instagram.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, ungasebenzisa amanye amaqonga ukusasaza igama ngokuba kwi-Instagram. Yabelana ngomxholo kwiwebhusayithi yakho. Sebenzisa iiakhawunti zakho Twitter y Facebook ukukhuthaza umxholo wakho we-Instagram. Kumele ukuba ibe nefuthe elibonakalayo kuzo zonke iiakhawunti zakho zeendaba zentlalo eziya kuthi ziyonyuse iprofayili yophawu.
Usenokuba nomdla woku okona kungcono kweefayile ze-Instagram.
Sebenzisa iithegi ze-hashtag
Iprofayile yakho ye-Instagram inenjongo enye, yokuqinisekisa ukuba abaphulaphuli bakho bayabandakanyeka kwaye, ngexesha elifanayo, ukushiya igumbi lokukhula.
IiHashtags ziyindlela entle yokufezekisa!
Ungasebenzisa iwebhu yeWebhu ukuhlala uhlaziywe kutshanje hashtags yotyekelo lwentsholongwane. Kodwa ukusebenzisa ii-hashtag ezifanelekileyo ukufumana incoko ujikeleze uphawu lwakho yenye into. Iilebhile esele zinomkhwa aziyi kongeza ukuzibophelela kokujikeleze uphawu lwakho.
Kodwa musa ukusebenzisa iithegi ezifanelekileyo uye kwibali Uzama ukucacisa ngemifanekiso. Ikwanokuba yinto yokukhangela elula ye-hashtag yabantu ukuze babone umxholo wakho kulondawo yakho. Iinkqubo zasimahla, ezinje nge-Icon isikwere kunye neWebstagram, zingasetyenziselwa ukukunceda ukuba ufumane iithegi ezifanelekileyo.
Ngokwesiqhelo, ii-hashtag ziya kuba negama lakho lesazisi okanye uhlobo lwemveliso oyingcali kuyo. Ke ngoko, ukuba uthengisa ikofu kunye ne-ice cream, sebenzisa ilebhile ekhangelekayo kodwa efanelekileyo, efana #Sabor del Día okanye #Martes de Frutilla, njl.
Khumbula lo mthetho kwaye landela abalandeli Balandela ke naye. Oku kudala inkqubo yendalo apho umxholo unokuya ngokukhawuleza kwentsholongwane, kuba inokufikelela kwelona nani liphezulu leendaba kwindawo yokutya, ubuncinci bexesha.
Zama ukufumana abantu abafanelekileyo abakumzi mveliso wakho abavelisa izithuthi kunye neenkcazo kunye nezinto owuthandayo. Zama ukubalandela kuqala. Kunye nayo, landela nabani na onilandela naye.
Qiniseka ukuba ubadibanisa abalandeli bakho kunye nophawu lwakho. Ukuba wenza imveliso ethandwa ngabasebenzisi bakho, bacele ukuba babelane ngeyona mizuzwana ilungileyo nabo imveliso phakathi Instagram, kwaye usebenzise i-hashtag enokuthi iphucule i-naration oyifunayo ukwakha.
Masithi yinkampani ye-ice cream, ifuna ukubamba iinkumbulo ze-ayisikhrim ezenziwe ngabasebenzisi bayo. Mhlawumbi ungasebenzisa i-hashtag efana ne #Domingos de Amor kwaye ucele abalandeli bakho ukuba babe negalelo kumxholo.
Kukwabalulekile ukulandela abo ubangisana nabo kwaye ujonge into eyenzekayo kumsebenzisi wakho. Ngale ndlela, unokufumana abasebenzisi abasebenza kakhulu kwiqonga. Ungaqala ukulandela abo basebenzisi kwaye uthande kwaye ubeke izimvo kwiiprofayili zabo ukubatsala.
1 Iindlela zokufumana uluhlu lwabalandeli abaqinileyo
1.1 Sebenzisa amanye amajelo ukusasaza igama
1.2 Sebenzisa iithegi ze-hashtag
1.3 Landela abanye
Izizathu ze-6 zokuba kutheni i-Instagram ilungele ishishini lakho